Tag: laharana fikarohana | Martech Zone
Tag: laharana fikarohana
Alarobia, Febroary 24, 2021 Talata, Aogositra 24, 2021 Douglas Karr
Manampy mpanjifa orinasa izahay izao amin'ny fampiharana tranokala WordPress vaovao. Izy ireo dia orinasa marobe, misy fiteny maro ary manana valiny ratsy maharaka amin'ny fikarohana nandritra izay taona lasa izay. Rehefa nikasa ny tranokalan'izy ireo vaovao izahay, dia nahita olana vitsivitsy: Archives - nanana tranokala marobe izy ireo tao anatin'ny folo taona lasa izay misy fahasamihafana hita eo amin'ny firafitry ny tranokalan'izy ireo. Rehefa nanandrana ny rohy pejy taloha izahay dia 404'n tao amin'ny tranokalan'izy ireo farany.
Azontsika atao ve ny mametraka an'io adihevitra io? Toa ahy fa misy matihanina sasany any izay manao vava ratsy amin'ny valan-tserasera nefa tsy azony tsara ny vokatr'izany. Ny sosialy dia fomba fampiroboroboana izay manangana fifandraisana misy eo amin'ny marika ary koa manome anao fampahafantarana amin'ny mpihaino marobe kokoa. Tsy te-hikambana daholo aho, fa ny ankamaroan'ny tabataba dia avy amin'ireo matihanina SEO - izay tsy manao izany tsotra izao